merolagani - मुक्तिनाथ विकास बैंकको बोनस सामान्य घट्यो, चुक्ता पूँजी ३ अर्ब नाघ्ने
मुक्तिनाथ विकास बैंकको बोनस सामान्य घट्यो, चुक्ता पूँजी ३ अर्ब नाघ्ने
Sep 13, 2018 Merolagani
मुक्तिनाथ विकास बैंक (MNBBL) को बोनस सामान्य घटेको छ । गत बर्षको कमाईबाट बैंकले आफ्नो शेयरधनीहरुलाई १८.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्लो बर्ष बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो ।
बैंकले हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ५९ करोड १७ लाख ६३ हजार ३१७ रुपैयाँको १८.२५ प्रतिशत बोनस तथा बोनसमा लाग्ने ०.९६ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ६० हजार १२३ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बैंक सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृत भएपश्चात बैंकको साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई वितरण हुनेछ ।
बैंकले बोनस वापत ४७ करोड २९ लाख ९६ हजार ८०६ रुपैयाँ तथा बोनसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि दुई करोड ४८ लाख ९४ हजार ५६९ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्नेछ । यसअनुसार बैंकले कूल ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ३७५ रुपैयाँ लाभांशमा खर्च गर्नेछ ।
गत आर्थिक बर्षमा मुक्तिनाथले १८.१९ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएर ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ ।
सेञ्चुरी बैंकको लाभांश प्रस्ताव, बोनस भन्दा नगद बढी
नागरिक लगानीकोषले प्रस्ताव गर्यो लाभांश,कति दिदैछ बोनश ?
रिलायन्स फाइनान्सद्धारा लाभांश घोषणा
नेपाल लाइफले एक अर्ब नाैं करोड रूपैयाँ बोनस बाँड्ने, नगद कति ?
जेबिल्स फाईनान्सको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत